27 August 2021 Volume :9 Issue :37
Kusukela phezulu kwesobunxele: uMnu Tyrone Bright, uMnu Bill Bright noSolwazi Glen Bright, uBill Bright kugujwa usuku lwakhe lokuzalwa, umndeni wakwa-Bright, uMnu Bill Bright noNkk Sheila Bright ngenkathi eseyiMeya yase-Howick, uMnu Bill Bright nezijumbana zokudla ze-World Food Programme zaseMokhotlong noMnu Bill Bright ngeMpi YesiBili Yomhlaba.Click here for English version
Umndeni wakwa-Bright ugubha iminyaka eyikhulu yomfundi wakudala wase-UKZN uMnu William Thomas (u-Bill) Bright, owazalwa mhla we-13 kuNcwaba ngowezi-1921, walwa empini yamasosha aseNtshonalanga eMpini yomHlaba Yesi-2, waphunyuka ekuboshweni yiNazi, walekelela ekwakhiweni kwe-Sani Pass ngeminyaka yezi-1950, waba yiMeya yase-Howick KwaZulu-Natal iminyaka eyishumi.
Ukuqoqela abantwana bakhe umlando wakhe onothile oSolwazi Glen Bright, uMnu Martin Bright, uNks Judy van de Langkruis noNks Sally Hallows, u-Bright wabhala incwadi ngempilo yakhe ethi On Days Like These ngonyaka wezi-2009.
Ngemva kokufunda e-Durban High School, u-Bright wangena kwi-First Field Engineers ngaphansi kombutho wamasosha ngoNhlaba wezi-1940, waqeqeshwa e-Zonderwater eGauteng ngaphambi kokugibela umkhumbi i-SS Rohna esuka kwelakubo eThekwini eyoqhuba ukuqeqeshwa eKenya. Wabayivolontiya ezikebheni zempi ethwala amasosha e-Carbineers ewela uMfula iJuba eSomalia, kanti wayenkanise ngemva kwamasosha i-South African Brigade eGazala eLibya, lapho khona eminye yemisebenzi yakhe kwakungukucisha izibhamu zesitha nokuvula indlela ukuze amasosha edlule kahle.
Phakathi kwezigemegeme zakhe e-Italy kukhona ukuhlenga inkampani eyayigcwele ushampeni eyayizoqhunyiswa ngebhomu ngamasosha aseJalimane, ukuya emcimbini kaPhapha u-Pius we-XII emele inkampani yakhe ngemva kokuthi iRoma ikhululwe ngamasosha aseNtshonalanga ngoNhlangulana wangowezi-1944. Eminye imisebenzi kwakungukwakha amazibuko phezu kwemifula nokuhlwaya iziqhumane.
Ngasekupheleni kwempi, u-Bright wabanjwa ngamaJalimane, wagqunywa enkanjini yamaNazi amasonto ambalwa. Waphunyuka edutshulwa, wadubuleka edolweni, akuhlalela esibhedlela ngenkathi esebuyile.
Esebuyele eNingizimu Afrika ngemva kokuphela kwempi, u-Bright wabhalisela ukufunda ebusuku iziqu kwezomnotho eNyuvesi yaseNatali ngenkathi esebenza kwaloliwe eThekwini. Kwakunguye yedwa umfundi weZomnotho we-III, kanti wethweswa ijazi ngo-1952. Wabhalisela izifundo zokundizisa ibhanoyi e-Durban Flying Services.
Wathuthela e-Himeville ngasekupheleni kweminyaka ye-1950 ngemva kokushadelwa ngu-Sheila, owashona ngoMasingana ngowezi-2020. Ngenkathi esahlala e-Himeville, wenza izinto eziningi eseseLesotho, okubalwa kuzona ukuvakashela eLetšeng Diamond Mine, okwaba ngokokuqala ukuwelela khona ngemoto ehamba nge-Ford Taunus ne-Land Rover, okwakuyisivumelwano sokuthuthela iNhlangano Yezizwe izijumbana zokudla ziya eMokhotlong zisuka e-Underberg Station ukunqamula e-Sani Pass, okwaholela ekwakhiweni komgwaqo wase-Sani Pass.
Wayebambisene nabalingani ababili ukuvula indlela, ngaleyonkathi eyayisetshenziswa wumhlambi wezilwane, ukuhamba nge-4x4 emzileni kwaphucula isimo sokuthuthwa kwezimpahla eziya neziphuma eLesotho.
U-Bright ngenkathi ethuthela e-Howick nomndeni wakhe ngeminyaka ye-1970 wayekhuthazwa ukuphucula indlela yokuphatha idolobha, waqala waba yikhansela, wase eba yimeya iminyaka eyishumi.
U-Bright usahlala e-Howick nendodakazi yakhe u-Sally endlini ayakhela umndeni wakhe emhlabeni ongama-acre ali-12. Ungumkhulu ka-Cameron no-William Hallows, u-Nicholas no-Sarah Bright, u-Tyrone Bright no-Leo van de Langkruis. Amadodana akhe ahlala eThekwini kanti indodakazi yakhe u-Judy ihlala e-Switzerland.
U-Bright usesele yedwa embuthweni wamasosha ayebuthwe nawo.
‘Siwumndeni simhlonipha kakhulu uBaba,’ kusho iDini neNhloko yeSikole seZobunjiniyela.
Umndeni ka-Bright uqhubekile nesiko lomndeni lokufunda; amadodana akhe amabili afundela ubunjiniyela kwathi indodakazi yakhe u-Judy yenza iziqu zeSayensi eNyuvesi yaseNatali. Umzukulu wakhe u-Tyrone uyisizukulwane sesithathu sakwa-Bright ukufunda e-UKZN waphasa ngamalengiso i-Master’s cum laude kwi-Mechatronic Engineering kulonyaka.